Iinkampani ezininzi zisebenzisa iTeknoloji ukubeka iliso kubasebenzi | Izisombululo ze-OMG
I-International Data Corp (IDC) yenze uphando kwindawo yokusebenza kwaye yaxela ukuba i-30 ukuya kwi-40 ipesenti yexesha lokufikelela kwi-intanethi yabasebenzi yayingahambelani nomsebenzi. Ezinye izibalo zibonisa ukuba i-21 ukuya kwi-31 ipesenti yabasebenzi yayithumele ii-imeyile ziveza ulwazi olunobuthathaka njengeemfihlo zorhwebo, iimfihlo zokuqonda, ngaphandle kwenethiwekhi yokudibanisa; I-60% yazo zonke ivenkile online zenziwa ngexesha lomsebenzi. E-United States yaseMelika, ilahleko yonyaka ekhutshweni ngokusebenzisa igolide kwi-intanethi iqikelelwa kwi-40%.
Iindlela zokuphononongwa zibandakanya iKhamera efihliweyo, ukuRekhoda iZwi, ukuKhangelwa kweGPS, ukuKhangela ii-Keystroke, ukuhambisa iintambo, kunye nokubeka iliso kwi-Intanethi kubandakanya ukubek 'esweni abasebenzisi bewebhusayithi, ukuthumela umyalezo kwangoko, i-imeyile kunye nokusebenzisana kwiiSayithi zokuNxibelelana kweNtlalo.
Esona sizathu sibalulekileyo soqwalaselo lwabasebenzi kusetyenziswa itekhnoloji yakutshanje ukubathintela ukuba basebenzise iintlobo zabo zezixhobo. Kusemthethweni ukuba abaqeshi bajonge ukusebenzisa kwabasebenzi iifowuni ze-smart-phone, iilaptops, iikhompyuter, kunye nezinye izixhobo ngexesha lomsebenzi. Umba wokuba semthethweni uya ngokuba mbi xa abanini beshishini bejonga abasebenzi besebenzisa indidi yezixhobo zokusebenza ngaphandle kweeyure zomsebenzi okanye besebenzisa izixhobo zabo ngexesha lomsebenzi.
Phambi kokubeka endaweni inkqubo yokujonga umsebenzi, kufuneka ucacise imigaqo yokusetyenzwa okwamkelekileyo nokungamkelekanga kwemithombo yobutyebi ngexesha leeyure zomsebenzi kunye nokwakha uMgaqo-nkqubo oYilisekayo Wokusetyenziswa kwe-AUP ekufuneka abasebenzi bavumelane nayo. Sinezixhobo ezikumgangatho wehlabathi zokujonga abasebenzi. Ngeenkcukacha ezithe kratya Cofa apha.
Iinkampani ezininzi zisebenzisa itekhnoloji ukubeka iliso kubasebenzi:
Ikhamera efihliweyo, i-GPS Trackers, kunye neeRandi Recorder zezi zixhobo ezichaza ixesha elitsha labasebenzi abaxhunyiwe, kodwa ezinye iingcali zithi ezi teknoloji zibeka nemfihlo yabasebenzi emngciphekweni.
Umzekelo, uxwebhu lwaseburhulumenteni olusandula kungeniswa ngetekhnoloji enkulu iAmazon lubonisa iintlobo ezahlukeneyo zeekhamera ezifihliweyo, iiRekhodi zeZwi kunye neeGPS Trackers ezinokubukela imisebenzi yabasebenzi. Inkampani ekhokelayo yetekhnoloji esekwe eWisconsin Three Square Market yaqala inkqubo yekhamera efihliweyo yabasebenzi bayo ngoJulayi 2017. I-UPS inabasebenzisi benzwa kwiilori zayo zokuhambisa ukulandela ukuvula nokuvalwa kweminyango, i-injini yemoto, nokuba ibhanti lesitulo sivalekile.
USam Bengston, injineli yesoftware eMakethi emiThathu, uthe uzimisele ngokuzithemba ukuba ingangeniswa kunye ne-microchip.
Wayengazange akucinge nokungakwenzi; Ubuye wathi usebenzisa i-chip ukuswayipha kumagumbi akhuselekileyo kunye nokungena kwikhompyuter yakhe. Yayingamava afanelekileyo kwaye anomdla. Ezi zinto zintsha zinokuwenza umda phakathi kwemingcipheko yokhuseleko kunye nemveliso engcono.
Umnxibelelanisi wecandelo lobuchwephesha uDaniel Ives ubuchwephesha kwi-GBH Insights uthi kwiinkampani ngokubanzi, kwihlabathi liphela, abaqeshi bajonge ukuba nomsebenzi onxibelelanayo. Iinkampani ezinkulu zezobugcisa zifuna iindlela ukunika abaqeshi umlenze kunye nokuqonda kwedatha ekusebenzeni kwabo kunye nabasebenzi.
Kodwa olo lwazi lunokuza emva kokophula imfihlo yabasebenzi.
U-Ives uphinde athi ukusuka kumqeshwa kunye nembono yedatha yobuqu, olo lwazi lubaluleke kakhulu. Ukuba olo lwazi lungena kwizandla ezingalunganga, akukho nto yahlukileyo kunokophulwa okukhulu kwezokhuseleko.
U-Paula Branter ongumcebisi omkhulu kwi-Workplace Fairness, umbutho ongajonganga kwenza nzuzo noluntu osebenzela ukukhusela nokukhusela amalungelo abasebenzi uthe, “Abantu abayiqondi into yokuba akukho mithetho mininzi ekhusela imfihlo kwindawo yokusebenza. Inxalenye yenkxalabo kukuba abasebenzi bangangabinakho nokuba bayazi ukuba yonke idatha ilandelwa njani kwaye isetyenziswa njani.
Iinkampani zigcina abasebenzi babo bephaphame ngokusondeleyo ukuze bagwebe intsebenzo yabo kunye nokonyusa ukusebenza kwenkampani yabo emva kokuqokelela yonke idatha malunga nemisebenzi yabasebenzi. Itekhnoloji yale mihla ibonelela ngendawo kubanikazi beenkampani kunye namashishini okuya ngaphaya kwezixhobo zeewotshi ezindala okanye zeewotshi ezindala.
I-CBS inika ingxelo yokuba iinkampani ezininzi zilanda abasebenzi ngokusetyenziswa kweefowuni zabo, iikhamera ezifihliweyo, iRekhodi yelizwi, ukulandelelwa kweGPS. Xa bephuma bayazi ukuba ziphi. Umabonwakude uphinda athi ezinye iinkampani zibeka esweni zonke iziza abasebenzi abazindwendwelayo kwizikhangeli zabo, yonke into abayibekayo njengoko beyiTayipha.
Rhoqo, abaphathi basebenzisa itekhnoloji ukugweba imveliso yabasebenzi, bancede abasebenzi bajolise kwaye balinganise indlela abalichitha ngayo ixesha labo kule wotshi. Uninzi lwabasebenzi bachitha ixesha ngeendlela ezininzi abo basebenzi beenkampani ezininzi befika emva kwexesha, beshiya kwangoko okanye bedlala ibhola ekhatywayo okanye eminye imidlalo yekhompyuter kwiikhompyuter zabo imini yonke endaweni yokujonga umsebenzi wabo. Ke, itekhnoloji yakutshanje sesona sisombululo sisiso sabaqeshi sokubeka iliso kwimisebenzi yabasebenzi baseofisini nakwabanye abasebenzi.
Iimveliso zethu zokujonga umgangatho zisemgangathweni zithembekile kakhulu zokubeka esweni imisebenzi yabasebenzi. Nceda undwendwele iwebhusayithi yethu yesixhobo sokujonga.
Omnye umsebenzi waseCalifornia wabanjwa yikhamera efihlakeleyo ukuba wayisebenzisa kakubi i-PC yale nkampani kwaye wayechitha ixesha lombutho ekudlaleni imidlalo ngexesha-e-ofisini. Imisebenzi elolu hlobo inokubonwa ngokusetyenziswa kwetekhnoloji yakutshanje.
Zininzi iziphene kunye nokungakhathali ekusebenziseni izinto ezinjalo. Okona kubuyela umva kunye nento endingacingi ukuba siyicingile yile iyatshintsha kuqoqosho lwaseMelika ngoomatshini kunye neerobhothi ezithatha imisebenzi. Kwaye into enokwenziwa ngabantu kukucinga ngobugcisa, cinga iingcinga ezingaphandle kwebhokisi, cinga izinto oomatshini abangakwaziyo ukucinga, ukucinga izinto iirobhothi ezingakwaziyo ukucinga. Kwaye ukwenza loo nto ufuna inkululeko, kufuneka uthambe.
I-CBS iphinda igqithise ingxelo yokuba iNqaku leNew York Times elisandula ukuphanda indawo yokusebenza kunye neendlela zaseAmazon njengomzekelo wendlela yokubeka iliso kubasebenzi kungadodobalisa isimilo. Ijelo likamabonwakude lithetha enye into engendawo yokujonga abasebenzi ukuba iindawo, apho kusetyenziswa kakhulu ubuchwepheshe bokubeka iliso, kungakhokelela ekungongeni ukuze abaphathi bangazi oku. Ezinye iinkampani ezinje ngeNetflix kunye neGoogle zilandela isikolo esihlaziyekileyo seengcinga. I-Netflix inika iholide naninina ufuna ngelixa iGoogle inemigaqo-nkqubo ezolileyo kakhulu yokusebenzisa ixesha lakho; bakhuthaza ukuphupha kwemini.
Njani ikhamera efihliweyo, irekhoda yezwi, kunye nomsebenzi wokulandela umkhondo we-GPS:
Ikhamera efihliweyo ixhotywe ziibhetri; uninzi lubangela ngokunyanzelekileyo ukuba luxhume eludongeni okanye kungenjalo lunamathele kwinkqubo yombane. Basebenzisa unxibelelwano ngaphandle kwamacingo, nangona kunjalo, oko kuthetha ukuba akufuneki usebenzise ikhebula ukusuka kwikhamera ukuya kumamkeli. Oku kunokubenza balunge ngakumbi ukusebenzisa kwaye kube lula ukubafihla.
Ubukhulu berejista yelizwi yedijithali iza ngeendlela ezimbini; irekhoda elizinikeleyo lenzelwe ikakhulu ukurekhoda ilizwi kunye nezinye izandi okanye i-app eyakhelwe-ngaphakathi kwifowuni smart. Nangona kunjalo, ukuthathela ingqalelo izixhobo zakho zesandi ezikhoyo, unako ukuthimba izwi kwezinye audios kunye nezixhobo zokurekhoda.
Kukho uthungelwano lwehlabathi, lwe-satellite e-30 kwisiphelo seekhilomitha ze-20,000 ukusuka kumda wayo, obizwa ngokuba yiGlobal Positioning System (GPS). Kwixesha elidlulileyo, yayenzelwe ngokukodwa umkhosi we-United States yaseMelika kodwa ngoku nabani na unokufumana inzuzo kuyo. Icandelo le-GPS eliphethe ngesandla okanye ifowuni enokuqokelela imiqondiso kanomathotholo isasazwa ngokubanzi.
Iinkampani zijonga njani abasebenzi:
Abaqeshi banokuseta iikhamera zevidiyo ukuba zifunde i-imeyile, kunye neposi kunye nokujonga ukusetyenziswa kwekhompyuter kunye nefowuni. Iinkampani zisebenzisa umkhondo we-GPS ukubeka iliso kubasebenzi kwindawo yabo yokusebenza.
Indawo yokusebenza igcwele imizekelo ethi ngandlela ithile ixhomekeke ekubeni umsebenzi wakho uyakhawulezisa na. Njengomtya wabasebenzi abanyanzelekileyo ukuba basebenze kwindawo ekhawulezayo kunye namaziko okutsala umnxeba balandelela ubude bexesha kwifowuni. Abaqeshi kunye neeNkobe zeenkampani kunye namashishini banokufikelela kwii-imeyile zenkampani nakwiikhompyuter.
Iinkampani ezinkulu zezobugcisa zihlala zifaka isicelo selungelo lokushicilela, kwaye akunakuthintelwa ukuba ukulandelelwa kuya kuthatha imilo emitsha.
Abasebenzi bamkele iTekhnoloji yokuKhangela:
Ukwamkela ukuhlaselwa kwabucala ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile kuye kwaba yinxalenye yomsebenzi. Abantu bamkela nje le ndlela njengento ekufuneka beyenzile ukugcina umsebenzi. Ngamanye amagama, oku kuyalahleka edabini ngokweengcali ezithile. UPaula Branter umcebisi omkhulu kwi-Workplace Fairness uqaphele ukuba idatha sele iqokelelwa malunga nezinto ezenziwa ngabantu kwaye igcinwa phantsi kweemeko ezingaziwayo. Ngamanye amaxesha, abasebenzi bakhetha ukujongwa.
Ingaphezulu kwe-45 yabasebenzi abathathu be-80 ye-Market ye-3 bavumile ukuba ne-GPS Tracker. Umphathi omkhulu wale nkampani, u-Todd Westby uthe ngokuqhubela phambili kweTekhnoloji yeNkqubo yokuBekwa kwiHlabathi, abaqeshi banofikelelo olungaqhelekanga kwiindawo zabasebenzi. Kwiminyaka eliqela, iinkampani ezininzi eUnited States yaseMelika zikwazile ukulandelela abasebenzi bazo abaselula okanye abasebenza endle 'ngezixhobo zeGPS kwizithuthi. Ngobuchwephetsha bamva nje, iinkampani zinokulandela ukuba ziphi na iiNkqubo zePositioning Global Global kwiifowuni zeBosses zeNkampani. Kodwa ukulandela umkhondo kuveza izoyikiso zabaqeshi kufuneka baqonde ukuze bakwazi ukuqikelela ukuba izibonelelo zangoko ziyazisusa izoyikiso ezibalulekileyo. Ukulandela umkhondo wabasebenzi kunye nokusebenza kwenkqubo yokuBekwa kwiHlabathi kunganezibonelelo ezininzi kwiinkampani. Ngokuthatha isibonelelo sale teknoloji yakutshanje yokwandisa ubuchule kwishishini lakho ungathengisa iimveliso zethu ezisemgangathweni. Ndwendwela iwebhusayithi yethu kwaye ubone iinkcukacha zeemveliso zethu ezisemgangathweni.
Iinkampani zithatha ezi ziNzuzo zilandelayo ngokujonga:
Ukujongwa kwabasebenzi kuvakala ngokungathi umbutho awuthembi kubasebenzi bawo. Nangona kunjalo, uninzi lwezibonelelo ziza nokuseta izixhobo zokujonga kwishishini lakho. Ezinye zezi zibonelelo azizizo nokuba ziluncedo kwinkampani kunokuba ziluncedo kubaqeshwa ngokwabo. Umphathi wenkampani akakwazi ukubeka iliso kubasebenzi bakhe ngalo lonke ixesha. Injongo yokuBekwa esweni kwabaSebenzi kukwazisa umqeshi ukuba kuqhubeka ntoni kwishishini lakho ungekho.
Xa inkampani ibeka iliso kubasebenzi bakho ngalo lonke ixesha labo lomsebenzi, inkampani inokufumana iimpazamo okanye iimpazamo ezinokuthi zenzeke kwindawo yokusebenza ngosuku. Nanini na xa umaka umqeshwa ukuba wenze impazamo, unethuba lokunxibelelana naye kwangoko, uchaze impazamo yakhe, kwaye umnyanzele ukuba alungise iimpazamo kwangoko. Kwelinye icala, unokuqaphela la mava kwaye uwazise phambi komqeshwa kwixesha elizayo njengophononongo lwentsebenzo.
Iinkampani zamkela itekhnoloji ukubeka iliso kubasebenzi ukuphucula ubudlelwane nabaqeshi. Unokuziqaphela phantsi iimpazamo zabasebenzi kwaye endaweni yokuba ubachaze kwangoko, ungaxoxa nabo kamva ngexesha elifanelekileyo. Umkhwa wokuthimba umntu owenza impazamo unokubangela uloyiko nokungazithembi kwaye umqeshwa angakhululeki kwaye angoyiki ukwenza iimpazamo. Oku kunganciphisa imveliso yomqeshwa.
Ngokuzithandela okanye ngabasebenzi ngokuzithandela banokwaphula imithetho yezokhuseleko enokuba yingozi kubo kwaye bonzakale kakhulu. Ngokuba nenkqubo yokubek 'esweni, umphathi unokujonga nayiphi na imicimbi yezokhuseleko eyenzekayo, kubandakanya neengozi ezincinci zokukhuseleka emgangathweni okanye ngaphezulu, ngakumbi kwiindawo zomsebenzi ezinobungozi bokhuseleko, ezinje ngoovimba kunye neendawo zokwakha.
Ungamakisha amalungu enkqubo yokuqhekeza abasebenzi. Kuya kuhlala kukho abasebenzi abanenkohliso- ngakumbi ukuba unenkampani enkulu enabasebenzi abaninzi. Ngalo mzekelo, ufuna ukukwazi ukubamba aba basebenzi bahlala bekholelwa ngokungalunganga ukuba ngaphezulu kwemigaqo. Ufuna ukubabamba kwisenzo sokwaphula imigaqo-nkqubo yenkampani ngaphandle kolawulo. Ngokuzibeka esweni, unokwazi ukubamba abasebenzi abanetyala kwaye usebenzise amanyathelo oluleko kwangoko.
Olunye uncedo oluzisa iinkampani ukuba zisebenzise itekhnoloji yakutshanje yokujonga imeko kukuphuculwa kwexabiso lemveliso. Indlela asebenzisa ngayo ixesha lakhe eofisini inegalelo elikhulu kwimveliso yenkampani yakho iyonke. Ngokujonga abasebenzi, ungayibona into abayenzayo nexesha labo, ekuncedayo ukuba usebenze ngeendlela onokwenza ngazo abasebenzi bakho-kunye neofisi xa iyonke-ibe nemveliso ngakumbi. Ngeemveliso zokujonga kwakhona ndwendwela iwebhusayithi yethu.
4322 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-8 Namhlanje